Ifektri Yaphansi ye-LVT | I-china LVT Flooring Manufacturers, abahlinzeki
Vinyl flooring Luxury PVC k ...
LVT zaphansi 3d Floor Stic ...
Ikhwalithi ephezulu ye-SPC ...
SPC zaphansi Core Ngesandla Esiqinile Ngo ...
I-LVT flooring Self-adhensive PVC Plastic Vinyl zaphansi
Imfushane ngothayela we-vinyl wokunethezeka, i-LVT yakhelwe ukuphindaphinda izinto zokwenziwa kwaphansi ezinjengamatshe noma izinkuni, kepha zinikeze izinzuzo eziningi ezisebenzayo. Kutholakala ngamapulangwe noma kumathayili, i-LVT isebenzisa ifilimu ephrintiwe enezithombe kanye nongqimba we-vinyl ocacile ovula imiqondo eyahlukahlukene yokuklama.
Iphansi le-PVC luhlobo olusha lwezinto zokuhlobisa phansi ezisetshenziswa kakhulu emazweni emhlabeni wonke namuhla. Idume kakhulu ezimakethe zase-Europe naseMelika kanye nasemakethe yase-Asia-Pacific, futhi futhi ithandwa kakhulu e-China, futhi amathemba ayo entuthuko abanzi kakhulu.
I-PVC flooring inemibala ehlukahlukene, njengokusanhlamvu kwamatshe, okusanhlamvu kwaphansi kwezinkuni, njll. Ukuthungwa kungokoqobo futhi kuhle. Ibhodi ngalinye lezinkuni lifakwe embossed, futhi ukuphrinta nokuthungwa kuhambelana nokwakha ukuthungwa kwangempela kwezinkuni nokubukeka. Ilungele izinhlobonhlobo zezitezi futhi isetshenziswa emakamelweni anezimoto eziningi, njengamagumbi okuhlala, amakhishi, izindlu zangasese, amakamelo okulala, amakamelo ezivakashi noma amasango nemigwaqo yokuheha izinhlamvu zamehlo. Ingafakwa kukhonkolo, amathayili, i-vinyl noma ukhuni, futhi ukuhlanganiswa kokudala kungasikwa ngokukhululekile. Nikeza impilo injabulo futhi ukhulule ukucindezeleka ngokushesha. Iphansi liza nokuzinamathisela, okungasetshenziswa ngokudwengula iphepha lokukhishwa. Iphansi liyisicaba futhi libushelelezi ngaphandle kwesihlabathi nothuli. Ngommese wokusetshenziswa, ungasika ngokuthanda kwakho, unikeze ukudlala okugcwele ebuhleni bomklami, futhi uzuze umphumela omuhle wokuhlobisa; kwanele ukwenza umhlabathi wakho umsebenzi wobuciko, nendawo yakho yokuhlala ibe yisigodlo sobuciko, sigcwele ukunambitheka kobuciko.